आज काठमाडौँमा प्रतिकेजी ५० रुपैयाँभन्दा कम मूल्यको तरकारी र फलफूलहरू कुन कुन छन् ? - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
काठमाडौँ / कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले आज आइतबारको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य विवरण प्रकाशित गरेको छ । जसअनुसार आज रातो आलुको औसत मूल्य प्रतिकेजी ४९ रुपैयाँ, भारतीय रातो आलु २९ रुपैयाँ, मुडेको आलु ४६.५० रुपैयाँ, सेतो आलु ३४.५० रुपैयाँ रहेको छ भने स्थानीय काउली प्रकितेजी ५५ रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, लोकल काक्रो २५ रुपैयाँ, हाइब्रीड काक्रो १२.५० रुपैयाँ, हरियो खुर्सानी ८५ रुपैयाँ, हरियो माछे खुर्सानी ६५ रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी टनेल गोलभेडा ३२.५० रुपैयाँ र लोकल गोलभेडा २२.५० रुपैयाँ, घिरौला १७.५० रुपैयाँ, चिचिण्डो २२.५० रुपैयाँ, झिगूनी ३२.५० रुपैयाँ, तिते करेला २५ रुपैयाँ, फर्सी पाकेको ३७.५० रुपैयाँ, लोकल बन्दा ४५ रुपैयाँ र तने बोडी २५ रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, भन्टा डल्लो २४ रुपैयाँ, लाम्चो भन्टा २२.५० रुपैयाँ, भिण्डी २७.५० रुपैयाँ, सेतो मूला १७.५० रुपैयाँ, रुख कटहर ३५ रुपैयाँ, लौका १७.५० रुपैयाँ, हरियो फर्सी २५ रुपैयाँ पर्नेछ कालीमाटीले जनाएको छ ।
प्याज सुकेको (भारतीय)
# तरकारी # फलफूल
सोमबार अधिकांश तरकारीको भाउ घट्यो, हेर्नुस् मूल्य विवरण
आज कुन तरकारीको भाउ कति छ ? हेर्नुस् थोक मूल्य विवरण
कालीमाटीमा कुन तरकारीको भाउ कति तोकिएको छ ? हेर्नुस् मूल्य विवरण
तरकारी किन्न जाँदै हुनुहुन्छ ? थाहा पाउनुस् आजको मूल्यसूचि विवरण
काठमाडौंमा तरकारी भाउ कति छ ? यस्तो छ मूल्यसूचि
प्याजको भाउ घट्यो, अन्य तरकारी र फलफूलको मूल्य कति छ ? हेर्नुस् मूल्यविवरण
दसैँमा आइएमई डबलको डबलको डबल अफर : साप्ताहिक, मासिक र बम्पर उपहार साथै आकर्षक बोनस